WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲအားကစား Rider ကိုခိုးယူ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
နေအိမ် → Aprilia → WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲအားကစား Rider ကိုခိုးယူ
19 ဇွန် 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲအားကစား Rider ကိုခိုးယူ
WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲခိုးယူ
146-1402-+ကမ္ဘာ့စူပါမွမ်းမံထားသောဆိုင်ကယ်-Phillip-ကျွန်း + 1.jpg
ပိုကောင်းတဲ့အဘို့နှင့်ပိုဆိုးဘို့, ယူဂျင်း Laverty Phillip ကျွန်းအတွက် WSBK ရာသီဖောက်တံများတွင်ဇာတ်ကောင်ခဲ့သည် . လူမျိုးအတွက် 1, အဆိုပါဆူဇူကီးမြင်းစီးသူရဲတစ်ဦး Win-လျော့နည်း Streak ကြားဖြတ်မှသတ္တမအနေအထားကနေအံ့မခန်းတစ်ကျော့ပြန်နှင့်အတူပြပွဲခိုးယူ 94 ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်များအတွက်လူမျိုး (အဆိုပါ GSX-R ကိုနောက်ဆုံးအနိုင်ရပြန်ရက်စွဲပါ 2010, Kyalami အတွက်, တောင်အာဖရိက) ပြန်မှအနိုင်ရ- မတူညီသောစက်ဘီးပေါ်ကျောလူမျိုး (Aprilia ကနေပြောင်းပြီးနောက်). လူမျိုးအတွက် 2, သူ polesitter Sylvain Guintoli ဆန့်ကျင်ထိပ်မှာတိုက်ပွဲစဉ်သည်သူ၏အင်ဂျင်သွားကြဖို့ခုနစ်ခုသောက်အတူတက်မှုတ် (Aprilia) နှင့်ရီ Baz (Kawasaki), အနီရောင်အလံချီလွှဲခြင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲရပ်တန့်ဖို့မာရှယ်သတိပေး, အိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိ count ကအထက်ဖြစ်သကဲ့သို့ပြန်လည်စတင်ရန်မပြုခဲ့ရသော 66 စုစုပေါင်းအကွာအဝေး၏ရာခိုင်နှုန်းကို.
ဒါဟာဆက်ဆက်စံပြမဟုတ်ခဲ့, အဆိုပါ Irishman ကပြောပါတယ်. စုံလင်သောအပြေးပြိုင်ပွဲပြီးနောက်, ငါသည်အခြားအနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ထင်. အဆိုပါလမ်းကြောင်းတစ်နည်းနည်းချောခဲ့သည်, Guintoli ဟာအရှိန်အဟုန်ခဲ့, နှင့် Kawasaki ထောင့်မှထွက်ရရန်နောက်ဘက်ချုပ်ကိုင်ထား၏အမှန်တကယ်အစာရှောင်ခြင်းအားသာချက်ယူပြီးခဲ့ကြ, သော်လည်းငါ့စက်ဘီးကယ့်ကိုခေတ်ရဲ့သွက်လက်ခဲ့ငါတကယ်ပဲထိပ်မြန်နှုန်းလိုငွေပြမှုတက်သည်ကိုဖန်ဆင်းပြီးထပ်မံပထမနေရာရနိုင်တယ်ခံစားခဲ့ရ.
နေဆဲ, သူက Marco Melandri ၏ဖွဲ့စည်း Aprilia ရဲ့စက်ရုံနှစ်လုံးကိုရှေ့ပြေးသည့်အခါ Laverty တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့ကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း (အဆိုပါ RSV4 အပေါ်သူ့ကိုအစားထိုးခဲ့သူမြင်းစီး . ယင်းချန်ပီယံအတွက်သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှပြီးသွားပေမယ့်) နှင့် Sylvain Guintoli. အဆုံးစွန်သောလူမျိုးတစ်ဦးအနိုင်ရရှိနှင့်အတူအီတလီထုတ်လုပ်သူရွေးနှုတ်တော်မူ 2, သြစတြေးလျလမ်းကြောင်းသည်မိမိစျြမွတျနိုးအတည်ပြု, သူကတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယနေရာတွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကယူဘယ်မှာ.
ကြှနျတေျာ့ပခုံးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဆောင်းရာသီမှာချိုးစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးကိုခွဲစိတ်ရှိခြင်းပြီးနောက်, လေးလကြာတဲ့စက်ဘီးစီးနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, ဒီအကြှနျုပျဘို့အိပ်မက်ဆိုး၏အဆုံးဖြစ်ပါသည်, အသစ်ကချန်ပီယံခေါင်းဆောင်ကပြောသည်. ငါထွက်ရှိပါတယ်ပျော်စရာခဲ့, ရင်ခွင်အပြီးငါခိုလှုံရာရင်ခွင်တိုးမြှင်နှင့်. လူမျိုးအတွက် 1, ကိုယ့်လောဘကြီးတယ်.
ငါနွေး-Up session တစ်ခုအတွင်းမှာအမြန်ဆုံးခဲ့သည်, ငါအပြေးပြိုင်ပွဲ၌တူညီသောအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ထင်. ကံမကောင်းသဖြင့်, အဆိုပါလမ်းကြောင်းအခွအေနမတူညီတဲ့ဖြစ်သက်သေပြနဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးအဆင့်၌ကျန်ကြွင်းအများကြီးယာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ.
ထိပ်တန်း form မှာ Laverty နှင့် Guintoli နှင့်အတူ, အခြားမြင်းစီးသူရဲမှတ်အခြေချခဲ့. Melandri လူမျိုးအတွက်ဒုတိယနေရာ ယူ. , 1, ဒါပေမယ့်အလှည့်မှာကျယ်ပြန့်သွား၏4လူမျိုးအတွက် 2, အဋ္ဌအနေအထား၌သူ၏စင်မြင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုနှင့်ပြီးဆုံးရှုံး. တစ်ဦးကအမှားအီတလီကြောင်း, ယခင်က BMW ကားနှင့်အတူ, အသစ်ကဆိုင်ကယ်နှင့်အတူပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံမရှိခြင်းအပေါ်အပြစ်တင်, အဘယ်သူ၏အလားအလာအများကြီးပိုမြင့်.
တွမ် Sykes ဆန့်ကျင်ဘက့်ကြမ္မာခံစား. လူမျိုးတစ်ဦး blistered နောက်ဘက်ယာနှင့်အတူရုန်းကန်ပြီးနောက် 1, အဆိုပါ Brit သည်သူ၏ ZX ၏ setup ကိုနှင့်အတူအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်- 10လူမျိုးအတွက်တတိယနေရာယူ R ကို 2. အဆိုပါနန်းသက်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအဖြစ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံး outing အတွက်, however, သူသည်မိမိအ Kawasaki နှင့်အတူ related ရိုးရှင်းစွာတွေထက်ပိုပြီးကိစ္စများရှိခဲ့. Baz အလှည့်၌ငါ့ကိုအပေါ်တကယ့်ရန်လိုအပြောင်းအရွေ့ကိုဖန်ဆင်း 4, ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲများတွင်ဖြစ်ရပ်များတစ်မကောင်းတဲ့ကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်ရာ, Sykes လေ့လာတွေ့ရှိ.
ငါထို့နောက်ဒေးဗီးစ်၏မျက်စိကန်းဘက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရ, နီးပါးပျက်ကျ. ငါမြင်းစီးအများကြီးရာသီ၏ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲအတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရနားလည်, ငါမူကားတစ်ဦးချန်ပီယံဖြစ်ခြင်းငါ့ကျောပေါ်တစ်ပစ်မှတ်မထားပါဘူးမျှော်လင့်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, Phillip ကျွန်းကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖူး, ဒါကြောင့်ငါပြန်ဥရောပပိုမိုသင့်လျော်သောဆားကစ်ဖို့ဦးတည်မတိုင်မီအတော်လေးအနည်းငယ်အချက်များနှင့်အတူထားခဲ့ဖို့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်.
မိမိအစွပ်စွဲရန်လိုအသင်းဖော် Baz လူမျိုးအတွက်ဒုတိယနေရာ clinched2တစ်ဦးပျက်ကျမှု-မရရှိသေးတပတ်အကြာတွင်ယုံကြည်မှုပြန်လည်. ငါတကယ်ကဒီစင်မြင့်လိုအပျ, ငါသုံးကြိမ်ပျက်ကျခဲ့နှင့်ငါ့ mechanics ရဲ့အချို့အပိုအလုပ်အပ်ပေးတော်မူ၏အဖြစ်, အဆိုပါပြင်သစ်ကဆိုပါတယ်. ဒါဟာ groove ပြန်ရရှိရန်မလွယ်ကူခဲ့ဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ.
Davide Giugliano Ducati များအတွက်လမ်းကိုဦးဆောင် . အဆိုပါ Panigale အပေါ်နှစ်ခုအစိုင်အခဲစတုတ္ထနေရာအရပ်ချောတာ . သော Off-ရာသီအတွင်းရာ၌တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုများကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် (Phillip ကျွန်းအတိတ်ထဲမှာ Panigale အတှကျကောငျးခဲ့ပေမယ့်). အလားတူဟွန်ဒါများအတွက်ဟုဆိုနိုငျ . ယောနသန်သည် Rea ဟာ CBR1000RR အပေါ်အသီးသီးပဉ္စမနှင့်ဆဋ္ဌမဖြစ်သကဲ့သို့ . အဆိုပါစက်ဘီးနေဆဲအချို့အီလက်ထရောနစ်အသေးစိတ်ကိုထုတ်မီးပူရန်လိုအပ်ပါသည်, နှင့်အဖွဲ့သည်မတ်လကုန်ဆီသို့စပိန်နှစ်ခုအပိုစာမေးပွဲများစီစဉ်ထား, Cartagena အတွက် Jerez နှင့်အခြားတ.
ဒါဝိဒ်သည်ရှာလုံ (Kawasaki) နဝမနှင့်ဆယ်ဘို့တဘို့ရာအရပ်ကိုချောနှင့်အတူ EVO လူတန်းစားကိုဦးဆောင်, အာရုန်သည် Yates ဟာ EBR နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်မှာကသူ၏ပွဲဦးထွက်မှာရမှတ်ဇုန်လွဲချော်စဉ် 1190 RX. အဆိုပါစက်ဘီးကအားလုံးကိုတနင်္ဂနွေခဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုခဲ့သည်, အမေရိကန် Said. ကျနော်တို့နွေး-Up session တစ်ခုအတွက်တစ်ခုခုရှာတွေ့, လွန်ကဲကဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်အရာ.
ငါခေါင်းဆောင်များ၏လမ်းရတဲ့မဟုတ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲ၏အဆုံးဆီသို့ဦးတည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်ရန်အထဲကသတ်မှတ်ထားသောအမှုကိုပြု၏, နှင့်နှစ်ဦးစလုံးလူမျိုးပြီးစီးပြီးအများကြီးပိုဒေတာရဖို့ခဲ့သည်. ကျနော်တို့ကဒီမှာအောင်မြင်အရာကိုဂုဏ်ယူ Aragon ကိုသွားနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါချန်ပီယံယခုပြန် Aragon ဖို့ဦးတည်ရှေ့တော်၌ခြောက်ရက်သတ္တပတ်ချိုးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ် (စပိန်), ဧပြီလအပေါ်ဒုတိယအကျော့အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့် 13.
ကမ္ဘာ့ဖလားအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ Phillip ကျွန်းလူမျိုး 1 ရလဒ်များကို:
1- ယူဂျင်း Laverty (IRL) Suzuki
2- Marco Melandri (, ITA) Aprilia
3- Sylvain Guintoli (FROM မှ) Aprilia
4- Davide Giugliano (, ITA) Ducati
5- ရီ Baz (FROM မှ) Kawasaki
6- ယောနသန်သည် Rea (GBR) ဟွန်ဒါ
7- တွမ် Sykes (GBR) Kawasaki
8- Chaz ဒေးဗီးစ် (GBR) Ducati
9- ဒါဝိဒ်သည်ရှာလုံ (SPA ကုမ္ပဏီ) Kawasaki EVO
10- Niccolo Canepa (, ITA) Ducati EVO
11- Glenn Allerton (FROM မှ) BMW ကား EVO
12- Fabian Foret (FROM မှ) Kawasaki EVO
13- Claudio Corti (, ITA) သင်္ဘော MV Agusta
14- ဂျယ်ရမီ Guarnoni (FROM မှ) Kawasaki EVO
15- Sheridan မိုရေးမြို့ထဲ (RSA) Kawasaki EVO
17- အာရုန်သည် Yates (ယူအက်စ်အေ) APR
DNF Allesandro Andreozzi (, ITA) Kawasaki
DNF လီယွန် Haslam (GBR) ဟွန်ဒါ
DNF အဲလက်စ် Lowes (GBR) Suzuki
DNF Toni ဧလိယ (SPA ကုမ္ပဏီ) Aprilia
ကမ္ဘာ့ဖလားအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ Phillip ကျွန်းလူမျိုး2ရလဒ်များကို:
1- Sylvain Guintoli (FROM မှ) Aprilia
2- ရီ Baz (FROM မှ) Kawasaki
3- တွမ် Sykes (GBR) Kawasaki
5- ယောနသန်သည် Rea (GBR) ဟွန်ဒါ
6- လီယွန် Haslam (GBR) ဟွန်ဒါ
7- Chaz ဒေးဗီးစ် (GBR) Ducati
8- Marco Melandri (, ITA) Aprilia
9- Toni ဧလိယ (SPA ကုမ္ပဏီ) Aprilia
10- ဒါဝိဒ်သည်ရှာလုံ (SPA ကုမ္ပဏီ) Kawasaki EVO
11- Niccolo Canepa (, ITA) Ducati EVO
13- အဲလက်စ် Lowes (GBR) Suzuki
စမ်းသပ်ခြင်းစီးနင်: 2009 Aprilia Mana850
2007 Aprilia Tuono 1000 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ R ကိုစက်ရုံမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Aprilia RSV4 Stuntbike StuntBums Build
2011 Aprilia RSV4 စက်ရုံ APRC အရှေ့တောင် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & အကြံ…
အားကစား-Tourer နှိုင်းယှဉ်- RST1000 vs Aprilia Futura. BMW ကား R1150RS…
ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဆူဇူကီး AN 650 Ducati Desmosedici GP11 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati Diavel Brammo Enertia ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Aprilia Mana 850 စမတ် eScooter သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Ducati 60 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 Bajaj Discover အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက်